MINJCODE Wired Handheld Laser Barcode Reader miaraka amin'ny Adjustable Stand MJ2806AT
Ny scanner barcode dia vita amin'ny plastika ABS avo lenta izay miantoka ny fiainana maharitra, mahatohitra ny 5.0 ft / 1.5m Drop to Concrete, IP 54 Grade Dustproof ary Water Resistant, endrika ergonomika, fahatsapana mahazaka.
MINJCODE Vidiny mora Wired 1D CCD Handheld USB Bar Code Reader MJ2816
CCD Wired Barcode Scanner Ultra High 2500 Pixel Precise Resolution USB Barcode Reader, plug ary milalao.
Wired 1d Laser Barcode Reader USB/RS232/PS2 Interfaces azo atao, MINJCODE MJ2808
3.3mil avo lenta: mora mamaky ny kaody bare matevina avo lenta, scanner barcode tànana avo lenta, maotera maotera miaraka amin'ny interface USB RS232 manohana ny barcode 1D. Ambaratonga indostrialy: IP54.
Scanner Barcode CCD 1D Wired portable portable MINJCODE MJ2816
Ity scanner barcode ity dia azo ampiharina amin'ny kaody tokana tokana sy ny fikandrana barcode screen, manohana windows 7/8/10, windows XP, azo diovina amin'ny savony, rano na fanadiovana rano hafa.
Tanjona ankapobeny Handheld 1D Bi-Directional tariby Laser Barcode Scanner MINJCODE MJ2809
tariby laser barcode scanner tànana tànana tariby barcode mpamaky scan sy decodes linear 1D barcodes, 3.3mil avo lenta: mora ny mamaky ny avo hakitroky barcodes
32-bit ARM CPU haingam-pandeha, famolavolana ergonomika mampahazo aina, fanorenana mafy orina, plug and play.IP54 Grade Dustproof and Water Resistant.Dorp test:1.5m.
Barcode Scanner CMOS Sensor USB Port miaraka amin'ny Stand MJ2806AT
Mora ampiasaina amin'ny laser barcode scanner ho an'ny orinasa, fivarotana, fivarotana lehibe, tranomboky, orinasa express, fivarotana antsinjarany ary trano fanatobiana entana.
1D Laser USB Barcode Scanner Auto Sensing miaraka amin'ny Stand MJ2808at
Oem iray-dimensional code china mpanamboatra mora indrindra，Flexible adjustable stand ho an'ny scanning tsy misy tanana.Plug and play, fametrahana tsotra miaraka amin'ny seranan-tsambo USB rehetra.
Mpamaky barcode tariby tariby 1D matihanina miaraka amin'ny fijoroana ho an'ny IOS Android MJ2809at
Fametrahana tsotra ny scanner barcode, mora ampiasaina, kanto ny endrika, safidy tsara indrindra amin'ny trano fitehirizam-bokatra fivarotana fivarotana fivarotana Supermarket Library Express Company.
Wired Handheld CCD Barcode Scanner Red Light 1D Barcode Reader MJ2816
OEM Fixed Mount Bar Code Scanner Module ho an'ny mpanamboatra MJ2260
Ny endrika indostrialy, miorina tsara ary maharitra dia mahafeno fepetra amin'ny fiarovana tsara kokoa, vonona amin'ny karazana tontolo iainana miasa.
Ny habeny kely, mora ampidirina amin'ny fitaovana, indrindra ho an'ny famerana ny habaka.
32-bit avo lenta CPU, manome fahafahana ny kilasy-mitarika haingana decoding ho in-200 isan-tsegondra.
Ireo interface tsara USB, RS232, TTL, PS2 dia ao anaty sambo, manohana ny rafitra Linux, Windows, Android, IOS.
Fahombiazana tsara miaraka amin'ny fanjifana herinaratra ambany sy ny fahombiazan'ny vidiny.
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana. Vokatra asongadina, Sitemap, China Barcode Scanner, QR Code Barcode Scanner, QR Code Reader Barcode Scanner, Barcode Scanner, Scanner Barcode tanana, Barcode Scanner mora, Ny vokatra rehetra